SP 33/ Fivoriambe 2019. – FJKM
SP 33/ Fivoriambe 2019.
FIVORIAMBE SP TOLIARA FIHAVAOZANA (SPTOLFI 33)
Nanatontosa fivoriambe ny Synodamparitany Toliara Fihavaozana ny Alakamisy 01 Aogositra hatramin’ny Alahady 04 Aogositra 2019 lasa teo. Notontosaina tao amin’ny Fitandremana Rasalama Maritiora Fihavaozana Toliara izany fivoriambe izany. Nitarika ny fotoana ny andron’io Alakamisy io ny Prezidà Synodaly ny Mpitandrina RANDRIANARISON Jean Evariste ary Andriamatoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi Mpitandrina Filohan’ny FJKM no nitondra ny Tenin’Andriamanitra izay nitsidika ny SP tamin’io fotoana io. Nalaina tao amin’ny 1 Tim 6, 11-19 ny Soratra Masina notoriana ka notsoahina tamin’izany ireto loha-hevitra ireto : Asain’Andriamanitra hino isikaAsain’Andriamanitra hiady isikaAsain’Andriamanitra hanao ady tsara isika.
Nampiofana ny Kristiana tonga nivory ny Filohan’ny FJKM ny tolakandron’ny Alakamisy ihany ary namelabelarany ny lohateny hoe : “Hafatra ho amin’ny 50 taona ho avy” ka nisongadina tamin’izany fampiofanana izany ireto hevitra manaraka ireto :
Miorena tsara ;Mitondrà tena tsara ;Manaova asa tsara ; Mifankatiava tsara ;Mitoria tsara. Marihina fa nisy tamin’ireo tonga niofana tamin’io fotoana io ireo Kristiana hafa toy ireo avy amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy monina ao Toliara rehefa nandre fa mandalo ao an-toerana ny Mpitandrina Filohan’ny FJKM sady Filohan’ny FFPM rahateo.
Natao ny Alakamisy 01 Aogositra 2019 io ny fanavaozana ny Biraon’ny Sekoly Alahady ao amin’ny Synodam-paritany (SA SP) sy ny Biraon’ny Sampana Fifohazana SP (SAFIF-SP). Ireo Mpitandrina miasa ao amin’ny Synodamparitany no namaranan’Andriamatoa Filohan’ny FJKM ny fihaonana tao amin’ny Fitandremana Rasalama Maritiora Fihavaozana Toliara.
Nitohy ny Zoma 02 Aogositra 2019 ny fivoriana ka taorian’ny fotoampivavahana maraina izay notarihan’ny Mpitandrina ANDRIANOLANINA Rija . Nisy ireo fampiofanana ka ny Mpitandrina RABEMANANA Tojonirina no nampianatra ny hoe : “Ataon’ny olona ho iza moa I Jesoa ? “ araka ny Mar 8/27-33. Ny Mpitandrina RAZAFINDRANANDRO Fanova kosa no nampianatra ny hoe : “Ny fandrosoana amin’ny asa fitoriana ny Filazantsara” araka ny Asa 8/1. Ny tolakandro kosa no nitondran’ny Mpitandrina RANDRIANANTENAINA Thierry ny hoe : “Tanora FJKM mendrika ny Filazantsara” sy ny hoe “Ny fiomanan’ny mpino kristiana ho amin’ny fanambadiana “ (Mariazy) izay notontosain’ny Mpitandrina RAVAKINIAINA David. Tontosa ny andron’ny Zoma io ny fanavaozana ny Biraon’ny SVM SP, toy izany koa ny fanavaozana ireo Biraon’ny STK SP, ny SLK SP ary ny VFL SP. Nisy ny takariva mahafinaritra ny Zomà alina ka nandray anjara ireo sampana avy amin’ireo Fitandremana ao anatin’ny Synodamparitany.
Ny fotoam-pivavahana ny Sabotsy 03/08/2019 maraina izay notarihah’ny Mpitandrina ANDRIATSITOHAINA Rakotonirina ar dia nofaranana tamin’ny Asa sy Fampaherezana. Nitohy ny fampiofanana ka ny Mpitandrina ANDRIANANDRASANA Rado no nampianatra ny: “Andriamanitra sy Kaisara”. Ny Mpitandrina RATOLOJANAHARY Tolotra kosa no namarana ny fampianarana ka nitondrany ny hevitra hoe:”Ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olona mbola mandala ny fomban-drazana Malagasy” Nisy ny fanofanana manokana ho an’ireo Biraon’ny Sampana vaovao ao amin’ny SP sy ireo Biraon’ny Fitandremana. Ny tolakandro dia nisy ny fihaonana ara-panatanjahan-tena. Ankoatra izay nisy koa ny fampirantiana isankarazany “Stand”nataon’ireo Fitandremana isanisany avy sy ny fifaninanana vakodrazana ary ny takariva mahafinaritra no namarana ny fivoriana io Sabotsy io.
Ny Alahady 04/08/2019 no Fanompoam-pivavahana famaranana ny Fivoriambe ka ny Mpitandrina RANDRIAMIANDRISOA Fanantenana no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Prezidà Synodaly no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Nofaranana tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny Fotoana. Nanatrika izao Fivoriamben’ny SP 33 tany Toliara izao ny ARORIAKA avy aty amin’ny FOIBE FJKM ka nitondra fanazavàna misimisy ny amin’ny Trano Fiantohana ARORIAKA. Nohazavaina koa ny tokony hanaovana ny fiantohana amin’ny loza rehefa ho an’ireo mamonjy fihaonam-be isan-tsokajiny no sady nampahafantatra ny vokatra azo jifaina rehetra ato amin’ny ARORIAKA.
Fanarahana ny Fampianarana nandritra ny Fivoriambe SP 33
Mamy RANDRIAMAMPIANINA (ARORIAKA)